तराई मधेशको मुड (दशैंपछिको विचार) | सहारा टाइम्स
Home » Politics » तराई मधेशको मुड (दशैंपछिको विचार)
तराई मधेशको मुड (दशैंपछिको विचार)
saharatimes Sunday, October 30, 20160No comments
दशैंको छुट्टीमा देश विदेशमा रहेका प्रायः व्यक्तिहरु आआफ्नो घर आउँछन् । त्यसबेला घर गएको बेला ती व्यक्तिहरुसँग भेटघाट हुन्छन् । घरघर, टोलटोलमा भेला हुन्छन्, त्यही बेला विभिन्न कार्यक्रमहरु पनि हुने गर्छन् । त्यस अवस्थामा विभिन्न भलाकुसारीको साथसाथै विभिन्न प्रकारका कुराकानी हुन्छ । प्रस्तुत छ, दशैंको बेला मधेश गएका नेता तथा विभिन्न व्यक्तिहरुसँग मधेशका मुड जान्न चाहेका छौ, उहाँहरुसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंश जस्ताको त्यस्तैः
मधेशी दलसँग अपेक्षा गरेर हुँदैन
अध्यक्ष, नेपाल सद्भावना पार्टी
मधेशी जनता अझै पनि मधेशको राजनीतिक प्रति नै आशावादी देखिएको छ । राज्यले हामीलाई धोका दियो, भ्रममा राख्यो भन्ने कुरा मधेशी जनताले राम्रोसँग थाह पाइसकेको छ त्यसैले मधेशी दलमाथि शंका गर्नु त्यसको विरोध गर्नु त्यस्तो काम कही भएको छैन । म दशैंमा आएको र हालसम्म यतै छु । दिनरात जनताकै बीचमा हुन्छु । विहान ७ बजे निस्केपछि राती ९–१० बजेतिर फर्किन्छु ।
जनताको अरु केही गुनासो नभएपनि कतै कतै यी पार्टीहरु अलग अलग राजनीतिक गरेकोमा गुनासो गरेको छ । तर हाम्रो पार्टीको हकमा त्यो लागु हुँदैन, किनभने म कुनै कारण विशेषले पार्टी अलग गरेपनि म नेपाल सद्भावना पार्टीमै छु । गजेन्द्रनारायण सिहले नेतृत्व गर्नुभएको सद्भावना पार्टीको अध्यक्ष हुँ अहिले ती पार्टीमा अरु दलहरु आउन म आग्रह गरिसकेको छु ।
अहिले पनि नेपाल सद्भावना पार्टीबाट अलग भएका दलहरु क्रियाशिल छन् ती सबैलाई पुरानै घरमा फर्किन म आग्रह गरिसकेको छु । अर्को कुरा मधेशी जनतालाई मधेशवादी दलमाथि गुनासो गर्ने अधिकार पनि छैन किनभने जिताएर एमाले, काँग्र्रेस र माओवादीलाई पठाएका छन् अनि अपेक्षा मधेशवादी दलसँग गरेर हुँदैन । भोट हाल्ने गैरमधेशी दललाई अनि अपेक्षा गर्ने मधेशी दलसँग यो सम्भव छैन । अहिले तीनै दल शक्तिमा छन्, उनीहरुलाई गुनासो गरोस् न ।
मधेशी जनताको कुनै गुनासो छैन
महासचिव, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी
मधेशवादी दलमाथि मधेशी जनताको कुनै गुनासो छैन । म दशैंमा धेरै मान्छेसँग भेटे । धेरै कार्यक्रममा पनि सहभागि भए तर त्यसप्रकारको गुनासो मैले कतै पाइएन । हामीले नराज्यसँग कुनै सम्झौता गरेको छौ, नसत्तामा गएका छौ भने मधेशी जनताले हामीसँग किन गुनासो गर्ने ? अहिले गुनासो गर्ने ठाउँ छैन । हो, एउटा गुनासो उनीहरुको छ त्यो हो पार्टीहरु अलग अलग रहनु । एउटै विचार, एउटै मुद्दा, एउटै आन्दोलन भएपनि मधेशवादी दलहरु किन अलग छन् भने कुराको गुनासो मधेशी जनताको रहेको छ ।
त्यसबाहेक मधेशवादी दलले केही गरेन, आन्दोलन खतम पार्यो, सम्झौता गर्यो, सरकारमा गयो जस्ता कुनै गुनासो छैन । बरु मधेशवादी दलहरु अझै पनि आन्दोलनमै छन् । जनताकै सम्पर्कमै छन् । त्यही भएर जनताको कुनै गुनासो छैन । बरु अब आन्दोलन कहिलेबाट शुरु गर्ने भनि सोधिरहेका छन् । राज्यले धोका दियो, अब वारकि पार आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा मधेशी जनता पुगि सकेका छन् । केपी ओली सरकार ढाल्नलाई प्रचण्डलाई सहयोग गर्दा जनता निकै खुशी भएका थिए ।
अहिले पनि त्यहाँ जनताले हामीलाई भन्छन् ठिक गर्नुभयो । ओलीभन्दा बरु प्रचण्ड ठिक छ कम से कम हाम्रो कुरा सुन्न त तयार भएका छन्, सविधान संशोधन गर्छुसम्म त भनिरहेका छन् । प्रचण्डलाई हामीले साथ दिएकोमा जनता उत्साहित छन् तर तीन बुँदे सम्झौतापछि जुन व्यवहार सत्ताधारी दलबाट भइरहेको छ त्यसले अलिकति जनतामा निराशा ल्याएको छ ।
जनतमा गुनासो पोका नै छ
केन्द्रीय सदस्य, सद्भावना पार्टी
यत्रो लामोसमयसम्म आन्दोलन हुँदा पनि केही उपलब्धि नभएकोमा मधेशी जनताले गुनासो गरिरहेका छन् । भन्छन्, मधेश आन्दोलन गरेर हामीलाई के फाइदा भयो । ६० जनाभन्दा बढी मधेशीको ज्यान गयो तर उपलब्धि शुन्य छ भन्छन् । बाध्यात्मक अवस्थामा मधेशी जनता मधेशवादी दलको साथमा छ तर कुरा गर्न जान्नुभयो भने १७ वटा गाली दिन्छन्, गुनासोको पोका नै खोल्छन्, जुन अन्य ठूला दलमा देखिए छैन ।
मधेशी नेताहरुले काठमाडौमा गरेको गतिविधिप्रति मधेशी जनता सन्तुष्ट छैन, आज यो हुन्छ, भोली त्यो हुन्छ भनि हामी सुनिरहेका छौ तर केही भइरहेको छैन, जनताले गुनासो गरेका छन् । सविधान संशोधनको लफडाले गर्दा मधेशी जनता निकै पीडित छन्, जनता चाहन्छन् कि समाधान छिटो होस् तर केही भइरहेको छैन, त्यसप्रति मधेशी जनता निकै आक्रोशित भएको मैले पाए । अर्को कुरा मधेशवादी दल अलग अलग रहेकोमा पनि मधेशी जनता निकै असन्तुष्ट छन् ।
संगठनात्मक रुपमा मधेशी किताबाट मधेशी जनता विस्तारै विस्तारै अलग हुने अवस्थामा पुगिरहेका छन् । यदि मधेशवादी दलहरु यस्तै गरि अलग अलग रहि रह्यो भने अन्त्यमा नेताहरु मात्र बाँकी रहन्छ जनता अरुतिर नै जान्छ । मधेशवादी दलहरुको बीचमा एकीकरण होस् भनि जनताको ठूलो
प्रेसर छ ।
काँग्रेसमा यतिका विवाद छन्, चार समूह छन्, एमालेमा तीन तीन समूह छन् माआवादीमा त्यस्तै छन् तैपनि उनीहरु फुट्दैन किन यो प्रश्न जनताले हामीसँग गर्छन् । मधेशवादी दल किन यति फुट्छन्, फुटेपनि किन जुट्दैन, मधेश जनताको जिज्ञासा हो यो । मधेशवादी दलले मधेशको मुद्दा लिएर, मधेशको सरोकारमा आन्दोलन गर्यो तर मधेशी जनतालाई आकर्षण गर्न सकेन ।
जसरी माओवादीले आन्दोलन गर्दा जनता सो पार्टीसँग भावनात्मक रुमपा जोडिएको थियो तर मधेश आन्दोलन भएपछि मधेशी जनता त्यसरी जोडिएको छैन, अर्थात मधेशी जनता जहाँ थियो त्यही छ । यो आन्दोलनबाट एकजना पनि काँग्रेस, एमाले, माओवादी छाडेर मधेशवादी दलमा गएको छैन । आन्दोलनमा सहभागि भयो तर मधेशवादी दलसँग जोडिएन ।
मधेशी जनता अब विकास चाहन्छ
प्रवक्ता, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी
यसापालीको दशैं मधेशी जनताको माझमा बित्ने भयो । दशैंको विदामा हरेक प्रकारका व्यक्ति आउने भएका हुनाले कुराकानी र भेटघाट पनि त्यही हिसाबले भयो । काठमाडौको जनताभन्दा मधेशका जनता धेरै सचेत भएका छन् । आफ्नो बारेमा आफै सोच्न थालेका छन् । जनता भन्छन्, राजनीतिक स्थिरता कायम होस्, विकास हामी आफै गर्छौ ।
अब राजनीतिक संक्रमण धेरै लामो समयसम्म राख्नु हुँदैन भने कुरा मधेशी जनताले भनिरहेका छन् । सधै आन्दोलन नै गर्ने, सधै पोल्टिक्स नै गर्ने हो भने मधेशको विकास कहिले हुन्छ । राज्य त यही चाहन्छ कि मधेशमा राजनीतिक उथलपुथल भइरहोस्, हामी आपसमा लडि रहुँ र त्यसको नाममा मधेशको विकास रोकि रहोस् ।
बजेट फ्रिज हुने डाटा हेर्नु भो भने सबभन्दा बढी मधेशका जिल्लाहरुमा छन् । त्यसको एउटै कारण हो मधेशमा जहिल पनि आन्दोलन नै भइरहन्छ त्यसले गर्दा विकासका कामहरु हुँदैन र विकासको रकम त्यतिकै फ्रिज भएर जान्छ । त्यसमा मैले जनता निकै गम्भीर भएको पाए । जनता आन्दोलनको मुडमा छैन ।
विकासको मुडमा छ । अब विकास गर्नुपर्छ भन्छन् । अर्को कुरा मधेशीवादी दलहरु अलग अलग छन् त्यो के कारण हो जनताले त्यो खोजी गरिरहेका छन् । एउटै मुद्दा, एउटै विचार, एउटै लाइन भएपछि पनि किन अलग अलग भनेर हामीसँग प्रश्न गर्छन् ।
मधेशवादी दलहरु एक भएर आयो भने हामीलाई पनि कुनै कुराको डिसिजन गर्न सजिलो हुन्छ भन्छन् । नत्र मधेशी जनता पनि अन्योलमा हुन्छ, कुन पार्टीमा जाने, कुन पार्टीलाई मत दिने, कुन पार्टीको कार्यक्रममा जाने जस्ता अन्योल छ मधेशी जनतामा । किनभने सबै दलको विचार सिद्धान्त एउटै हो । आन्दोलन पनि सँगै गर्छन् तर पार्टी अलग अलग भएका कारणले समस्या उत्पन्न भएको छ ।
मधेशमा बलियो नागरिक समाजको आवश्यकता छ
म यसपाली दशैं अवधिभर मधेशमै थिए । जनकपुर हुँदै सप्तरी पुगेका थिए । हरेक प्रकारका व्यक्तिहरुसँग भेटघाट गरे । मैलै आम मधेशी जनतामा निराशा पाए । जुन प्रकारको आन्दोलन भयो त्यसको केही उपलब्धी देखिएन । यसपालीको आन्दोलनलाई वारपारको आन्दोलन भनिएको थियो तर कुनै विना उपलब्धी समाप्त भयो ।
यसले गर्दा मधेशी जनतालाई आन्दोलनप्रति विश्वास हुन छाडेको छ । छठपछि पुनः आन्दोलन हुने कुरा मधेशी दलका नेताहरुले भनिरहनु भएको छ तर जनता भन्छन् अब किन आन्दोलन गर्ने, आन्दोलन गर्ने कुनै आधार चाहियो भन्छ । मैले मधेशी जनतामा आन्दोलनको मुड पाइएन ।
यदि आन्दोलन भएपनि यही नेता तथा दलको नेतृत्वमा हुने सम्भव छैन । मधेशी जनताहरु विकल्पको खोजीमा छन् । यी दलहरु बाहेक अरु कुनै शक्ति आए त्यसलाई साथ दिने मुडमा मधेशी जनता रहेका छन् । मधेशवादी दलका नेताहरु सबै केन्द्रमा बस्छन् । मधेशका जिल्लामा बस्ने नेताहरु सबै सदरमुकाम केन्द्रित भएका । त्यसले गर्दा त्यहाँका जनतालाई नेतृत्वदायी, तथा दिशानिर्देश गर्ने खालको व्यक्तित्वको अभाव छ । अर्थात बलियो र सक्षम नागरिक समाजको आवश्यकता यहाँ देखिएको छ ।
दलहरुलाई एकीकरण गर्न दवाव
अध्यक्ष, तराई मधेश सद्भावना पार्टी
यतिका दिनसम्म मधेशी जनता धैर्य गरेर बसेका छन् । यी तीन ठूला दल भनाउँदाहरुले पटक पटक मधेशी जनताको भावनासँग खेलबार गर्ने प्रयास गरेको छ । ६–७ महिनादेखि घनिभुत आन्दोलन गरे । काठमाडौमा पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरे तर राज्यले मधेशको माग सम्बोधन गर्न तयार भएन । वार्ताका लागि बोलाउने तर केही निर्णय वा सहमति नगर्ने ।
मधेशी दललाई अल्झाई राख्ने र आन्दोलन कमजोर गर्ने रणनीतिमा ती दलहरु थिए । अब यो कुरा मधेशी जनता राम्रोसँग थाह पाइसकेका छन् त्यसैले मधेशी जनताको गुनासो मधेशी दलभन्दा पनि ठूला दलको व्यवहारप्रति आक्रोशित छन् । यसपाली मधेशवादी दलले गर्दै आएको राजनीतिक गतिविधि प्रति मधेशी जनताको कुनै गुनासो छैन ।
जनताको साथ छाडेको छैन । झण्डै एकवर्षदेखि लगायतार आन्दोलनमा मधेशी जनताकै साथमा छौ । नसरकारमा गएका छौ, नकुनै सम्झौता गरेका छौ भने जनता हामीसँग किन गुनासो गर्छन् । हामीसँग जनताको कुनै गुनासो छैन ।
एउटा मात्र गुनासो छ कि तपाईहरु किन अलग अलग बस्नु भएको छ, एउटै लाइन, एउटै विचार, एउटै सिद्धान्त भएपछि त एकै ठाउँमा बस्दा भइहाल्यो नि ।’ हो, जनताले भनेको कुरा सही हो । सबैका विचार, सिद्धान्त र आन्दोलनको उद्देश्य एउटै हो भने अलग अलग किन ? एकै ठाउँ, नभए दुईटा वा तीनटा दल मात्र बनाएर आन्दोलनमा जान सकिन्छ ।
अनि जनताले हामीमाथि विश्वास गर्छ । त्यसका लागि मेरो तर्फबाट पर्यत्न भइरहेको छ । अन्य दलहरुसँग कुराकानी भइरहेको छ । तर कहिलेसम्म हुन्छ भने कुराको ग्यारेण्टी छैन ।
अब सम्झौता होइन, कार्यान्वयन हुने गरि आन्दोलन गरौं
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकातान्त्रिक)
मधेशी जनतामा निराशा र चिन्ता देखे मैले । काठमाडौबाट दशैंमा घर आउँदा विभिन्न स्तरका व्यक्तिसँग भेटघाट गरे । राजनीतिक कुराकानीमा मधेशी जनतामा निराशा पाए । ती निराशा मधेशी दलमाथि मात्र होइन, सत्ताधारी दल जो आफूलाई मुलधारका पार्टी छन् । ती दलका कारणले निराश छन् मधेशी जनता । मधेशमा त्यत्रो आन्दोलन भयो तर खासै उपलब्धी भएन । त्यसमा राज्य मात्र होइन मधेशी दल पनि दोषी रहेको जनताको भनाइ रहेको छ ।
हुनत राज्यका रवैया हेर्दा आन्दोलनको विकल्प छैन तर मधेशी जनता त्यसका लागि तयार भएको छैन । भन्ने वित्तिकै आन्दोलन हुने अवस्था मैले देखिनन् । अर्को कुरा, मधेशी नागरिकको एउटा बडो गम्भीर प्रश्न छ त्यो हो, अब कति दिन आन्दोलन गरि राख्ने । यो विवादलाई चाँडो टुग्याँउनु पर्ने भन्छन् । या कि सधैका लागि टुगिंने गरि आन्दोलन गर्नुपर्छ वा जस्तो छ त्यस्तै छोड दिनुपर्छ ।
पटक पटक आन्दोलन गर्ने र त्यसबाट केही उपलब्धी नहुने हो भने आन्दोलनको कुनै अर्थ रहदैन । त्यसले जनतालाई क्षति मात्र गरेको छ । मधेशमा तीनपटक आन्दोलन भइसक्यो डेढसय भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ तर उपलब्धी के जनताले प्रश्न गर्न थालेको छ । यद्यपी जनताले यो कुरा भनिरहँदा आन्दोलन हुँदैन भने होइन, जनता आन्दोलनका लागि अझै तयार छ तर अबको आन्दोलन योजनाबद्ध तरिकाले गर्नुपर्छ । सम्झौता होइन, कार्यान्वयन हुने किसिमकै आन्दोलन गर्नुपर्ने भन्छन् ।
नेतृत्व जवाफदेही भएन
दलका नेताहरुको चरित्र हेरेर मधेशी तथा थारुहरु इरिटेड भएका छन् । उपलब्धिविहिन आन्दोलन गरेर मात्र हुँदैन । जनताको चाहना अनुसार ड्यासिङ् पनि देखाउनु पर्यो नेताहरुले ।
म दशैंभन्दा पहिलेदेखि यता जिल्लामा छु । थारु बाहुल्य यो क्षेत्रमा यहाँका थारुहरु राज्यबाट मात्र होइन, मधेशी दलबाट पनि ठगिएका छन् । थारुहरु सोझा हुन्छन् भन्छन्, त्यही भएर हालसम्म ठग्दै आएका छन् । काठमाडौमा बसेर मधेश र थारुको नाममा राजनीतिक गर्नेहरु अब कतिपटक यी जनतालाई भ्रममा राखेर आन्दोलन गर्ने हो ।
मधेशी तथा थारु निकै निराश भएको पाए । एक त राज्यको क्रियाकलापबाट मधेशी तथा थारुहरु त्यतिकै निराश देखिन्थे तर मधेशवादी दलको पछिल्लो क्रियाकलाप हेरेर झन निराश भएका छन् । ६ महिनासम्म आन्दोलन भयो । ६० जनाको ज्यान गयो । कतिपय घरबारविहिन भयो । अहिले पनि कतिपय थारु तथा मधेशीहरु भगौडा भएका छन् ।
प्रहरीले अझै खोजिरहेका छन् । यी सब गरेर के पायौ त, मधेशी तथा थारुको प्रश्न हो यो ? मसँग प्रश्न गर्दा म नजावाफ भए किनभने म पनि एउटा पार्टीको जिम्मेवार व्यक्ति हुँ । तर पार्टीका नेतृत्व तहबाट भएको कमिकमजोरीको मार तलका कार्यकर्ता तथा नेतालाई परेको छ । राजनीतिको भूमिका उनीहरु हुन्छ तर के भयो कसो भयो त्यसको जवाफ दिन जनतामा जाँदैन । त्यसको असर जिल्लामा काम गर्ने पार्टी पंक्तिलाई परिरहेका हुन्छन् । त्यहाँ जनताले उनीहरुलाई भनिरहेका हुन्छन् ।
यतिकै तत्नेबला छैन मधेशी जनता
दशैंमा म सप्तरीमा थिए । त्यसक्रममा मधेशका थुप्रै प्रकारका व्यक्तिहरुसँग छलफल र कुराकानी भयो । नेता, पत्रकार, कर्मचारी, वकिल, बुद्धिजिवीलगायतसँग भेटे । उनीहरुको धारणा र विचार फरक फरक पाए । किनभने पत्रकार, वकिल, कर्मचारी, बुद्धिजिवीहरु कुनै नकुनै दलसँग आवद्ध हुन्छ र पार्टीका लाइन बोलिरहेका हुन्छ तर यथार्थ कुरा जान्नका लागि जनतामा जानुपर्छ र जनताले जे भन्छन् त्यही यथार्थ हो किनभने जनता कसैको हुँदैन, सबैका हुन्छ ।
मैले विभिन्न कार्यक्रम तथा भेटघाटको दौरान जनतामा गएर मधेश राजनीतिकको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरेका थिए । मधेशको राजनीतिकप्रति जनता निकै निराश भएको पाए । म पहिलो मधेश आन्दोलनमा मधेशभरि भ्रमण गरेका थिए । जनताको घरदैलोमा पुगेका थिए त्यतिबेला यतिको निराश थिएन जनता तर यसपटक साह्रै दुख व्यक्त गरिरहेको पाए । उपलब्धी विहिन आन्दोलन भयो भन्छन् मधेशी जनताहरु । बजार हिड्दा व्यपारीहरुले पनि त्यही भन्छन्, हामीले मधेश आन्दोलनमा दिएको योगदान खेर गएको हो त । हरेक क्षेत्रका मानिसले त्यही सवाल गर्छन् ।
हामीले पनि सम्झाउने प्रयास गर्छौ, भन्छौ कि २४० वर्षदेखिको सामन्ती सोचलाई दुई चार महिना आन्दोलन गर्दैमा समाप्त गर्न सकिदैन । यसका लागि लामो लडाईको आवश्यकता छ । मधेशी जनता आन्दोलनको मुडमा भएपनि यही इशुमा आन्दोलन हुँदैन ।
सविधान संशोधनमा हिन्दुराज्य वा राजतन्त्र यस्तै केही आयो भने एकपटक फेरि आन्दोलन हुन्छ नभए अब यो सिमांकन, समावेशी समानुपातिक, नागरिकतालगायतका विषयमा त्यति छिट्टो तात्ने अवस्थामा छैन मधेशी जनता ।